i-UKZN kuMbukiso wezemisebenzi eKearsney.
Abasebenzi beHhovisi lokuxhumanisa izikole kanye neNyuvesi, abeKolishi leSayensi yeZolimo, ubuNjiniyela kanye nakumunxa woCwaningo obizwa phecelezi Astrophysics and Cosmology Research Unit (ACRU) bebemenyiwe ukuba babe ingxenye kuMbukiso wezemisebenzi – Career Expo kwiKolishi laseKearsney.
Abafundi, othisha kanye nabazali abebethamele lomcimbi bebeliqhamukisa kulezi zikole esingabala kuzo i-St Mary’s Diocesan -isikole samantombazane, Thomas Moore College, Hillcrest High, Kloof High kanye ne-KwaNtembeni Comprehensive High School.
Lo munxa ongenhla woCwaningo uhehe intsha eningi ebisithathwe imibukiso ehlabahlosile.
Abafundi bathole amabhukwana anolwazi mayelana neKolishi leSayensi yeZolimo, kanye nezoBunjiniyela kanye nezinye izinhlelo ezijwayelekile ezitholakala eNyuvesi, bagixabezwe ngezikhwama, amapeni bephiwa ilo iKolishi leSayensi yeZolimo, kanye nobuNjiniyela.
UThishanhloko wase Kearsney, uMnu Elwyn van den Aardweg, uthe, kumhlab’ umxhwele indlela ababambe ngayo iqhaza labo abebengababukisi kanye nabafundi, egcizelela indlela lo mbukiso obe usizo ngawo kubafundi ukubenza ukuba bathathe izinqumo eziphusile mayelana nezifundo zabo zengomuso.